အလှည့်ကျ အပတ်စဉ် ငွေထုတ်ယူသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ငွေစုဆောင်းထားသူများကို ငွေပြန် မထုတ်ပေးသ?? - Yangon Media Group
အလှည့်ကျ အပတ်စဉ် ငွေထုတ်ယူသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ငွေစုဆောင်းထားသူများကို ငွေပြန် မထုတ်ပေးသ??
မြဝတီ၊ မေ ၂၂
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ကရင် ပြည်နယ် မြဝတီမြို့အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကူးသန်းသွားလာလျက်ရှိသော ကျောက်ဖျာစက်လှေဂိတ်တွင် အလှည့်ကျအပတ်စဉ်ငွေထုတ်ယူသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ သတ်မှတ်ရက်များတွင် ငွေထုတ်ပေးမှုမရှိသည့်အတွက် မြဝတီမြို့မှ ဒေသခံများက ကျေနပ်မှုမရှိ၍ စုဝေးတောင်းဆိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာမေ ၂၂ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီက မြဝတီမြို့အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်ရှိ ကျောက်ဖျာစက်လှေဂိတ်တွင် လူဦးရေ ၄ဝဝခန့်မှ စုရုံး ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် အလှည့်ကျ အပတ်စဉ်ငွေထုတ် ယူသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ဝယ်ယူထားသော ငွေလက်မှတ်တန်ဖိုး ငွေများ ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လာ ရောက်သည့်အခါ အဆိုပါလုပ် ငန်းမှတာဝန်ရှိသူများ မတွေ့ရှိ တော့သဖြင့် ယခုကဲ့သို့တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီမှာမရှိနွမ်းပါးသူလက်လုပ် လက်စားအများစုက တတ်နိုင်သ လောက်လက်မှတ်တွေ ဝယ်ကြ တော့တာပဲ။ ပထမခုနစ်ရက်ပြည့် တော့ ငွေကျပ် ၁၈ဝဝဝဝ စီတကယ်လည်း ထုတ်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်မှတ်တွေ စိတ်ကြိုက်ရောင်း ပေးပြီး နောက်ထပ်ခုနစ်ရက် အ ကြာမှာတော့ ငွေပြန်ထုတ်ပေးမှုမရှိ တော့ဘဲ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့သူ တွေကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်၊ ပျောက်သွားကြတယ်။ လက်မှတ် ရောင်းပေးတဲ့သူထဲကတချို့က မေ ၂၂ ရက်မှာ ပြန်ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာစုရုံးကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှလည်း လာတာမတွေ့ရပါဘူး။ ကျွန်တော်က လက်မှတ် ၁၅ စောင် ဝယ်ထားမိပါတယ်”ဟု မြဝတီမြို့ အမှတ်(၃)ကျွန်းတောရပ်မှဦးတင် အောင်က ပြောသည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းမှလူများသည် မတ်လခန့်မှစတင်၍ လက်မှတ်တစ်စောင်လျှင်ကျပ် ၁၅၅ဝဝ ဖြင့် ရောင်းချပြီးခုနစ်ရက်ပြည့်ပါက ငွေကျပ် ၁၈ဝဝဝဝ ပြန်ထုတ် ပေးကာ စတင်ရောင်းချပြီး ကြာလာသည့်အခါ ငွေထုတ်ပေးမှုမရှိ တော့ကြောင်းသိရသည်။ ”ဒီကိစ္စရဲ့အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေပါတယ်။ ဒီ နေ့လက်မှတ်ဝယ်ထားကြတဲ့ ပြည် သူ့တွေ ကျောက်ဖျာဂိတ်မှာ စုရုံး နေကြတယ်ကြားလို့ မလိုလားအပ် တဲ့ပြဿနာတွေ မဖြစ်အောင်ကျွန် တော်တို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက် ထိန်းသိမ်းပေးနေပါတယ်။ သူတို့ကဆန္ဒပြတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မခံချင်စိတ်တွေဖြစ်နေကြတာပေါ့။ အဓိကကတော့ သူတို့ငွေအရင်း ပြန်ရဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကူညီပေးသွားမှာပါ”ဟု မြဝတီမြို့မရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးမင်းကိုက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါစုဝေးနေသော ဒေသခံများသည် ”လူလိမ်များအလိုမရှိ” ”မရှိဆင်းရဲသားများ၏ ငွေများပြန် ပေးပါ”ဟု ကြွေးကြော်တောင်းဆို ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Netflix နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ဖျော်ဖြေရေးလောကထဲ ဝင်ရောက်လာသော အိုဘားမားတို့ ဇနီးမောင်နှံ
ငါးမဖမ်းရ ရာသီ ကာလအတွင်း ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းစက်လှေ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖမ်းဆီးခွင့်ပြု
ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်လာသော်လည်း တရုတ်ဘက်မှ အဖမ်းအဆီးနှင့် ကန့်သတ်မှုများကြောင့် မူဆယ် ကုန်စ??
တိုင်းရင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဝမ်းမြောက် အားတက်မိခြင်းနှင့်အတူ စိန်ခေါ်မှု မည်မျှကြီးမ?
”ငါတော်ပြီလို့ တွေးတဲ့ နေ့က အဲဒီအနုပညာရှင် ဂွမ်းမယ့်နေ့ပဲ” ခင်သဇင်
သဲတင်လာသော ယာဉ်တစ်စီး ကျေးရွာချင်းဆက် တံတားပေါ် မောင်းနှင်စဉ် တံတားကျိုးကျပြီး ချောင်းအတွင